UDUB Doorashadii Golaha Wakiillada Ee 2005 Waxaa Uga Soo Baxay 33 Mudane, Isaga Ayaana Ugu Sarreeyay, Halka Xisbiga Kulmiye Oo Waqtigan Talada Haya Ay U Soo Bexeen 30 Mudane, Kaalinta Labaadna Uu Ka Galay. – somalilandtoday.com
Muxuu Qalday Kulmiye?
Waxaa la yidhi, Nin Yuhuudi ah oo ka guurayay Ruushka ayaa markii uu marayay Madaarka Moscow waxaa saraakiishii Garoonku ku qabteen Sanam uu ka soo sameeyay hoggaamiyihii la odhan jiray Lenin. Sarkaalkii Kastamka ayaa waxaa uu weydiiyay waa maxay waxani.?
Yuhuudigii waxaa uu ku jawaabay, su’aashaadda wax baa ka qaldan. ha odhan waxaani waa maxaye. waxaad i weydiisaa waa kuma ninkani?
Waa hoggaamiye Lenin, waa aas-aasihii nidaamka hanti-wadaagga ah iyo horseedkii barwaaqada ummadda Ruushku ku naaloonayso. Waxaan u sitaa xasuus ahaan Geesigeennan.
Sarkaalkii kastamka Moosko fadhiyay isaga oo qiiraysan, ayuu ninkii Yuhuudiga ahaa u ogolaaday inuu sii wato safarkiisa isaga oo aan wax danbe oo su’aallo ah weydiin.
Haddana, Madaarka caasimiadda Israel ee Telaviv (Talaabiib),ayaa sarkaalkii kastamka fadhiyay isla su’aashii hore oo kale (Waa maxay waxani) weydiiyay ninkii Sanabka Lenin sitay.
Yuhuudigii waxaa uu ku jawaabay mar kale, su’aashaadda wax baa ka qaldan. ha odhan waxaani waa maxaye. waxaad i weydiisaa waa kuma ninkani?
Waa Lenin, waa Inkaarmihii shuuciga ahee ee igu khasbay inaan Yuhuudi ahaan uga soo barakaco Ruushka. waxaan u sitaa si aanan u hilmaamin xumaantiisa oo u nacdalo goor walba.
Sarkaalkii Kastamku waxa uu su’aashii ka bixiyay raali-gelin, waxaana uu u ogollaaday ninkii inuu qaato Sanabkiisa oo iska baxo.
Ninkii labadda kastam ka soo gudbay, waxaa uu casuumay saaxiibadii. mar kale waxaa la su’aalay Sanabkii. isna tabtii hore ayuu la soo booday ha khaldin su’aasha, Sanamka waxaan ka sameeyay Lenin. waa ninka ii soo badbaaday Tobannaan Kiiloo oo dahab ah cashuur la’aan.
Halkan, waxa ku duuggan, cashar muujinaya in shay qudha siyaabbo kala duwan loo fasiri karro, iyada oo sharraxaad kasta oo laga bixiyayna keenayso in lagu qanco oo aan wax su’aallo ah laga keennin.
Cidda qaabkan inay u fikirto laga rabaa waa siyaasiga, waa in uu arragti kali ah hadba dhinac ugu dhigi karraa bulshada kala duwan, islamarkaana abuuri karaa xamaasad shidaal u noqota oo u xanbaarta yoolka uu hiigsanayo.
Doorashadan isku sidkan haddii aynu u soo noqono, waxaa inoo muuqanaysa in Xisbiga Kulmiye hoos u dhac laxaad leh kala kulmay, iyada oo kaalinta labaad uu ku soo dhacay. halkii uu doorashaddii tan ka horraysay ka sarreeyay taageero ahaan isku darka labadda xisbi ee la loolamay.
Waxaa laga yaabaa in sababaha ay qayb ka noqon karto kala duwanaanta labadda doorasho. laakiin, haddii aynu si kale u dhigno lafteeda, waxaa cad inuu ka hooseeyo Xisbigii UDUB ee talada uga horreeyay. UDUB doorashadii Golaha Wakiillada ee 2005 waxaa uga soo baxay 33 mudane, isaga ayaana ugu sarreeyay, halka Xisbiga Kulmiye oo waqtigan talada haya ay u soo bexeen 30 mudane, kaalinta labaadna uu ka galay. Waxaana taas keenay qanaacad la’aan bulsho oo sababaha keenay ay ka mid tahay baalasha uu ku duullayay oo aan ahayn kuwii ku habboonnaa ee shacbiga u sharxi kari lahaa siyaasaddooda wax-qabad iyo wax qabad la’aanba.
Tusaale ahaan, Xukuumadda Kulmiye ee waqtigani waxyaabaha ugu waa weyn ee loo arkayay inay xoogga saareyso waxaa ka mid ah shaqo abuur (Shaqo-Qaran). Hay’adda shaqaalaha dawladda ee maantana waxaa lagaga kalsoonni badnaa aragtidayda Xiligii Xukuumaddii Siilaanyo oo aanay shaqo-qaran jirin. sababtu wax kale maaha, waqtigaas waxaa hoggaaminayay wiil aan khibrad badan oo hoggaamineed lahayd balse dhallinyaradda rajo-badan geliyay. haddana, innagga oo aan dhalliilaha gudaheeda loo tiriyo iyo dhaqaallaha badan ee dib u habaynta baanka Adduuku ku bixiyay eegin, cid badan oo ka war qabtaa ma jirto hawlaha ay ku fooggan tahay. Marka la soo ururiyo Madaxweyne Muuse Biixi maadaama muraayadda xisbigiisu taageeradda ku kasban karro ama ku waayi karaa ay tahay Xukuumadiisa waxaa looga fadhiyaa inuu dib u eeggo cida siyaasiyan la shaqeysaa inay yihiin kuwo iib-geyn karra talaabooyinkiisa iyo in kale. tan baddalkeeda waxaa Mucaaradka gaar ahaan Xisbiga Waddani laga rajaynayaa inuu dardarta kordhiyo oo aanu hoos uga dhicin kaallinta koowaad ee uu maanta halabsaday.
W/Q Mustafa Sheekh Cumar Geeddi